यसरी पनि बाँच्न विवश छ मान्छे, के तयाई यी युवाको पिडा महशुस गर्न सक्नुहुन्छ ? (भिडीयो हेर्नुहोस्) - Manavsewa Ashram
यसरी पनि बाँच्न विवश छ मान्छे, के तयाई यी युवाको पिडा महशुस गर्न सक्नुहुन्छ ? (भिडीयो हेर्नुहोस्)
निरन्तर उद्धारको लागि काभ्रेको पाँचखालबाट फोन आइरहेपछि मानवसेवा आश्रमको केन्द्रिय अध्यक्ष रामजी अधिकारी सहितको टोलि पाँचखाल पुग्यो ।
आश्रमको टोली पाँचखाल पुगी उद्धार गर्नुपर्ने सहयोगापेक्षीहरुको बारेमा सोदखोज गर्दा स्थानियहरुले नगरपालिकाको करिब २०० मिटर अगाडी रहेको पुरानो घरतिर इंगित गरे । आगनभरी घाँस उम्रिएको थियो । पालिमा मकैको खोस्टा र परालमाथि पुरानो बोरा थियो । आश्रमका अभियन्ताहरुले बोरा निकाले, त्यसपछि जुन दृश्य देखियो त्यसले सबैलाई चकित बनायो ।
बोराभित्र २८/३० बर्षका अत्यन्त कमजोर युवा भेटिए । उनको देब्रे हातको कुइनोको भाग पुरै कुहिएको थियो । युवालाई बोराबाट बाहिर निकाल्ने वित्तिकै पुरै क्षेत्र दुर्गन्धले फैलियो । हातबाट बुरबुर किरा झरेको दृश्य स्पष्ट देखिन्थ्यो । दुई हजार बढी बेसहारा सहयोगापेक्षी मानवहरुको उद्धारको अनुभव बटुलेका अभियन्ताहरुको मसेत युवाको कहालिलाग्दो अवस्थाले मुटु कमायो ।
युवाको माथिल्लो भागमा कुनै कपडा थिएन । स्थानियले सर्ट ल्याएर दिए, अभियान्ताहरुले जसोतसो घाउँको सकेको ड्रेसिङ गरे र उनलाई उद्धार गरी मानवसेवा आश्रम काठमाण्डौं शाखा कार्यालय सामाखुशीमा लगियो । हाल युवालाई मानवसेवा आश्रमले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर महांकालमा भर्ना गराइ उपचार गराइरहेको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको परिभाषा बोकेको संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य व्ववस्थाभित्र रहेको अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकारको भवनको अघिल्तिर भएको बेसहारा युवाको कहालीलाग्दो दृश्यले मानवताको धज्जी उडेको महशुस भएको मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
युवाले हालसम्म आफ्नो नाम, वतन र परिवारबारे केही बताउन सकेका छैनन् । उनी मनोरोगबाट समेत पिडित छन् ।
२०६९ साल भाद्र १३ गते मकवानपुरबाट सुरुवात गरिएको मानवसेवा आश्रमले २०८२ सालभित्र पुरै देशलाई नै घरबार विहिन, बेसहारा, असहाय तथा जीवन नै जोखिममा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरु रहित राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल मानवसेवा आश्रमले देशभर रहेका १४ ओटा केन्द्रहरुबाट ८०० बढीलाई संरक्षण दिइरहको छ ।
नियमित सहयोगी सदस्य बन्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !